बिहिवार, जेठ ५, २०७९ ०१:५२:३८ युनिकोड
सोमवार, पुष २८, २०७६ रंगसंसार
अभिनेत्रीबाट निर्देशक बनेकी झरना थापाकी पुत्री हुन् सुहाना थापा । सुहाना ए मेरो हजुर –३ बाट नेपाली रजतपटमा प्रवेश गरेकी वाला हुन् । ए मेरो हजुर – २ बाट नै नेपाली रजतपटमा प्रवेश गर्ने अभिलाषा र बाबु निर्माता सुनील कुमार थापा एवं अभिनेत्री निर्देशक झरना थापाको मोह भएपनि यसो हुन सकेन । हुन नसक्नुमा बाधक देखिए भुवन केसी पुत्र स्टार हिरो अनमोल के.सी । झरना र सुनिलको आँट त थिएन भने सुहानाको आट हुने कुरा पनि भएन ।
अनमोल केसीले ए मेरो हजुरमा अभिनय गर्ने कुनै अभिलाषा देखाएनन् अनि कसरी आट हुनु सुहानाको वा उनको बाबु आमाको सुहानालाई डेव्यु गराउन त मन थियो थापा दम्पतीलार्य तर स्टार हिरो चाहिएको थियो सुहानालाई स्थापित गराउन । अनमोलको स्टारडमको बुइ चडेर यो सफलता खोजेका थिए थापा परिवारले । ए मेरो हजुर – २ मा अनमोल राजी नभएपछि त्यो सपना तुहियो । ए मेरो हजुर – २मा हिरो बन्न पुगेका नव आगन्तुक सलिनमान बानिया प्रति थापा परिवारको विश्वास अरेको थिएन । यहि कारण ए मेरो हजुर ३ बन्नुप¥यो र स्टार हिरो अनमोलको आडमा डेव्यू गरिन् सुहानाले फिल्म चल्यो, सुहानाले पनि भलै क्रेडीट पाइन् । ए मेरो हजुर – ३ चल्यो र चल्नुमा कारक थिए अनमोल । अनमोललाई भजाइयो र वजाइयो बाजा । झरनाले निर्देशको क्रेडिट खोजिन् पनि । तर दीन तयार थिएन मिडिया । आफ्नै छोरीलाई हिरोइन बनाएपनि अश्लिताको पराकास्टामा सिनेमा बन्यो । आफ्नै छोरिसँगको यो अश्लिलता ! छोरी माथिको खेलबाड !! महिलाको चलचित्र यो छाडापन !!! गज्जव हो कार्य पनि । चलचित्र चल्नु सबथोक होइन । चलचित्रले के सन्देश छाड्यो । कलात्मकता कता देखियो । चल्छ भन्दैमा भोली छाडा चलचित्र बनाउने अनी मस्त चलाउने । चलचित्र बन्नु र चल्नुमा सबै थोक खोजिनु पनि त हुँदैन । इट्टाले बनेको घरमा बसेको एउटा काँचो इट्टा कतिखेर फुट्छ ! बुझ्नु पर्ने की नपर्ने ? दर्शकलाई छाडापनमा लैजाने की कलात्मकताको मनोरञ्जन दीने ।
चलचित्र स्वतन्त्रताको नाममा आम दर्शक भड्कन दिन पनि त हुँदैन । वर्ष बित्यो चलचित्र चलेको दम्भ रहिरह्यो । अवार्ड आयोजना भए । आमा बाबुको वहकाउमा सुहना पनि परिन् । अवार्ड पाए अवार्डस्थल जाने नत्र नजाने । पहिलो चलचित्रमा उनको कमी कमजोरी लत्याउदै प्रोत्साहनमा उनले अवार्ड पनि पाउन थालिन् । यो एउटा दम्भ थियो । सुहानाले भन्दा पनि झरनाले अवार्ड पाउनुपर्ने घमण्ड पालीन् उनले । उनको काममा न त कलात्मकता न त चलचित्रको कोडक्ट कन्डक्ट । यसैले झरनाले अवार्ड नपाउने झोकमा सुहाना पनि बन्दी बनिन् । यहि ‘बन्दी’को नतिजा थियो कामना फिल्म अवार्डमा सुहाना नपुग्नु पनि । अवार्ड मोह थिएन भने घरको कोठामा ‘ट्रफी’ बोकेर किन फोटो खिच्नु र किन गर्व पाल्नु । यदि चलचित्र उद्योग, यसका गतिविधि प्रति लगाव र योगदान खोज्ने हो भने रेष्टुरेन्टमा कफी खाएर अवार्ड समारोह लत्याउनु ठीक हो र ! यसबाट के देख्नज सकिन्छ भने सुहानाको काधमा बन्दुक राखेर झरना बन्दुक पड्काइरहेकी छिन् । यसले चलचित्रको भविश्य निर्धारण गर्दैन । होइन भने राष्ट्रिय चलचित्र उद्योग लक्षीत अवार्डको अनुपस्थिती अनि ट्रफी बोकेको फोटोले कुन ‘दम्भ’ प्रदर्शन गरेको छेन भन्नु । यसले छड्केको सुझाब छ काम राम्रो गर्नुस्, कलाको माध्यम हो पहिले कलाकारिता देखाउनुस् भरना जी !!!
प्रकाशित मिति: सोमवार, पुष २८, २०७६, ११:१७:००
राम–निलम, विछोड की मिलन ?
आंचलले कहिले आंचल ओड्ने !